श्रीमानसँग कहिले गर्नु हुँदैन यी पाँच व्यवहार – Health Post Nepal
श्रीमानसँग कहिले गर्नु हुँदैन यी पाँच व्यवहार
२०७७ वैशाख २६ गते १२:४१
श्रीमान श्रीमति बिचकाे सम्बन्धलाई सधै सुमधुर कसरी बनाउने?
सुमधुर सम्बन्ध जीवनको खुसी!
सबै मान्छेको चाहना बिहेपछिको जिन्दगी खुशीसँग बितोस् भन्ने हुन्छ। तर, आजभोली यसरी खुशीसँग जिन्दगी विताउने मान्छेको संख्या निकै कम छ। किनकी कुनै न कुनै रुपमा श्रीमान श्रीमतिबीच खटनपटन भइरहेको हुन्छ।
सामान्य खटनपटन हुनु त ठूलो कुरा होइन। तर, जब यसले विकराल रुप लिन्छ तब सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ। त्यसैले सधै सानातिना कुरामा विवाद सिर्जना नगरेर जीवनलाई खुशीसँग विताउने प्रयास गर्नुपर्छ। श्रीमान श्रीमतिलाई एक रथका दुई पाङ्ग्रा पनि भनिन्छ। त्यसैले सधै दुबैले एकअर्काको भावना बुझ्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।
श्रीमानले पनि श्रीमतिलाई खुशी राख्न भरपूर प्रयास गर्नुपर्छ। तर, यहाँ श्रीमानलाई श्रीमतिले सधै कसरी खुशी राखेर सम्बन्धलाई सुमधुरताका साथ अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने कुराको चर्चा गरिएको छ। श्रीमतिले यी पाँच कुरामा ध्यान दिँदा सधै सम्बन्धमा माधुर्यता आउँछ।
अर्काको श्रीमानसँग तुलना नगर्ने
सामाजिक सञ्जालमा आरुका श्रीमानका राम्रा तस्बिर देख्दा आफ्नो श्रीमानको तुलना नगर्ने। अरुको श्रीमानको राम्रो जागिरीसँग आफ्नो श्रीमानको कामको तुलना नगर्ने। सधै आफ्नो श्रीमानको भावनाको कदर गर्ने।
जस्तो सुकै दुःख सुखमा आफ्नै श्रीमानले साथ दिने भएकाले एक आपसमा रमाइराख्ने। श्रीमानले पनि आफ्नो परिवारलाई भरपूर खुशी राख्न आफूले सक्ने जति सबै प्रयास गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई बुझेर बरु ढाडस् दिने काम गर्नुपर्छ।
श्रीमानका लागि समय निकाल्ने
महिला सधै काममा व्यस्त हुन्छन्। किनकी उनीहरूलाई घरको कामदेखि बालबच्चाको स्याहार सुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। विहान बेलुका खाना पकाउन व्यस्त हुने र अन्य समयमा उनीहरू केटाकेटीसँग रमाउने गर्छन्।
दिनभर निकै व्यस्त हुने भएकाले उनीहरू थाकिसकेका हुन्छन्। राति सुत्ने वित्तिकै उनीहरूलाई निन्द्रा लागिहाल्छ। यस्तो अवस्थामा श्रीमानलाई समय दिन सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसैले समय निकालेर बेला–बेला श्रीमानका लागि पनि समय छुट्याउनु पर्छ। यसले श्रीमान श्रीमतिबीचमा सधै माधुर्यता कामय भइराख्छ।
श्रीमानको अपहेलना नगर्ने
सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ठूलो कुरा भनेकै एक अर्काको इज्जत गर्नु हो। एक अर्काको भावनाको सधै ख्याल गर्नुपर्छ। कहिले पनि आफ्नो श्रीमानलाई मजाकको पात्र बनाउनु हुँदैन। यस्तो गर्दा श्रीमानको मन दुख्न सक्छ र सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ।
श्रीमानसँग बैमनस्यता राख्नु हुँदैन
जीवनमा सबैभन्दा नजिका साथी भनेकै श्रीमान श्रीमति हुन्। उनीहरूको बीचमा सबै कुरा हुने गर्छन्। कहिले काही मान्छेबाट गल्ती हुने गर्छ। कतिपय अवस्थामा श्रीमान श्रीमतिको बीचमा बैमस्यतासमेत हुने गर्छ। यस्तो अवस्था श्रीमतिले श्रीमानसँग बैमनस्यता साध्नु हुँदैन। यदि दुबैले यस्ता कुरामा एक अर्कालाई माफि गर्दा जीवनमा कहिले पनि सम्बन्धमा दरार आउँदैन।
सम्बन्ध विच्छेदका कुरा नगर्ने
हामीले श्रीमान श्रीमतिका बीचमा सामान्य झै झगडा भइराख्ने कुराको व्याख्या माथि नै गरिसकेका छौं। कहिले काही श्रीमान श्रीमतिको झगडा हुनुलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ। तर, त्यही विषयले उग्र रुप लियो भने त्यो सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्छ। त्यसैले श्रीमानका कुनै बाँकी वा कुरा मन पर्दैन भने सम्झाई बुझाई गर्नुपर्छ। तर, कुनै कुराश्रीमान मन पर्दैन भन्दैमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने धम्की दिनु हुँदैन।